Somali (Soomaali) - refugio thüringen e.V.
Xarunta cilmi nafsiga ee qaxoontiga „REFUGIO Thüringen“ Waxa iman kara Dadka dalkoogi uga yimid dagaalo, Arimo siyaasadeed, (dhibaato Jinsi) ama dhibaatooyin kale. Halkan Germany, kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayay ku cuslaatay xasuus ah waayo-aragnimada iyo khataraha in dhulkooda hooyo. In kasta oo waayo-aragnimo fog tahay wixi hore ee la soo dhaafay, waxay dhibaatadu tahay xusuusta so noqnoqonaysa. Waxaad dareemi kartaa cabsi ama cadho xaaladaha qaarkood, oo qalbigooda gilgila Waxaana ama waxay leeyihiin madax-xanuun iyo xanuun kale oo jirka. Badanaa waxay sababeen madax xanuun badan, laakiin dawooyinku had iyo jeer ma caawiso Dhibaatooyinka hurdada iyo riyooyinka ayaa sidoo kale ku dhaca qaxootiga qaarkood. Astaamahaas oo dhan waxay ku noqon karaan jawaab-celin caadi ah ee dhacdooyinka aan caadiga ahayn.
Kooxdayada oo ah cilmi-nafsiga shaqada REFUGIO Thüringen bixiya caawimo nafsi. taliyayaasha Social la sameeya wada tashi, tusaale ahaan in ay caawiyaan arrimaha xeerka magangelyada ama joogitaanka, xaaladda guryaha, iyo ta xafiiska adeega bulshada ama xafiiska socdaalka ama su’aalaha ku saabsan cudurka, shaqada, carruurta iyo dugsiga. Waxaan sidoo kale bixinnaa talo bixin caafimaad, daaweynta jidhka iyo daaweynta farshaxanka ee dugsiyada.
In REFUGIO Thüringen waxaan leenahay jawi la isku halayn karo , dhibaatooyinka hadda jira ama waayo-aragnimada walaaca laga qaban karo . Waan dhageysanay oo qaadanay waqti iyo faham. Waxaan bixina talooyin.
Fadlan ogow in taariikhaha ay ku xiran yihiin helitaanka. Shaqaalahayaga * waan kuula soo xiriiri doonaa isla marka ay leeyihiin awood ah. Faahfaahintaada waxaa lagu hayn doonaa xaruntayada sisir ah. Nasiib darro, waxay qaadan kartaa dhowr bilood ilaa kulanka ugu horeeya ee ay sabab u tahay dalabaadka sare ee meelaha la-talinta iyo daaweynta. Waan ka raali gelineynaa wixii dhibaato ah.
Noo soo sheeg haddii faahfaahintaada xiriirka isbeddelo oo caafimaadkaagu sii xumaado. Talada iyo daaweyntu waa bilaash, kharashka socdaalka ayaa lagu siinaya. Waxaa jira turjubaano * dhinacaaga. Halkan waxaad ka heli kartaa foomkayaga codsiga. (Fadlan buuxi foomka Jarmal ama Ingiriisi.)
99096 Erfurt, Jarmal
Faahfaahinta la xiriir shaqaalaha * halkan.
Ma haysaa talo soo jeedin ama naqdin ku saabsan shaqadayada ama shaqsiyaadka shaqsiga ah? Macluumaadkaaga waxa loo xafidaya si sir ah iyo qarsoodi. Waad ku mahadsantahay aragtidaada.
Fadlan nagala soo xidhiidh: